Wararka - Daboolka derbiga ee PVC wuxuu noqon karaa mid aad u qurux badan!
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, raacdada aadanaha ee "qurux" ma joogsan. Horaantii dhamaadkii qarniyadii dhexe ilaa bilawgii qarnigii 18aad, dadka iswiidhishka ah ee sharafta leh iyo baayacmushtariyaasha taajiriinta ah waxay bilaabeen inay u adeegsadaan dahaadhka gidaarka sida qurxinta gudaha. Noocyadu waxay ahaayeen kaashmere derbiyada daboolaya, Gobelin daboolida derbiga, iyo dhaldhalaalka. Dahaarka maqaarka ee maqaarka, velvet satin derbiga daboolan, iwm, si loo muujiyo aqoonsigooda. Markii dambe, daboolida darbiyada jilicsan (dharka cudbiga ah) ayaa caan ku noqday dadka rayidka ah waxayna noqdeen xanaaqa oo dhan.
Maalmahan, iyadoo horumarka joogtada ah ee tikniyoolajiyadda wax soo saarka, noocyada darbiyada derbiyada lagu daboolo ay sii kordhayaan. Iyada oo leh laydh u gaar ah, bakteeriyada, caariyaysi, hawlo biyo-diid ah iyo antifouling, daboolida darbiga PVC ayaa aad loogu habeeyay baahiyaha deegaanno kala duwan waxayna daboolayaan baahiyaha dadka casriga ah Baahiyaha wax ku oolka ah ee dhismaha waxay u abuuraan jawi diiran, raaxo leh oo caafimaad leh dadka , taas oo aan la mid ahayn qalabka kale ee qurxinta derbiga.
Si kastaba ha noqotee, dadka qaar waxay si kaftan ah u sheegtaan in daboolka derbiga ee PVC uusan u noqon karin “mood moodo” darbiyada, maxaa yeelay aragtida ugu horeysa ee dadweynaha ee daboolka derbiga PVC waa wax ku oolkeeda.
1. "mid gaar ah" ee derbiga PVC daboolkiisa
Midabbada saddex-geesoodka ah iyo midabbada cufnaanta sare leh ee ay soo saaraan daboolka derbiga ee PVC ayaan la mid noqon karin daboolida dharka caadiga ah ee dharka lagu dhejiyo iyo darbiyada. Daboolka PVC ee darbiga ayaa lagu dari karaa qaabab qurux badan oo saddex-cabbir ah iyo qaabab midab leh si loo abuuro dusha sare. Saamaynta muuqaal ahaaneed ee derbiga daboolaya uusan gaari karin
Daboolka PVC ee darbiga ayaa lagu rogaa rollers, kaas oo isku dari kara qaabab kala duwan, qalab kala duwan, iyo midabbo kala duwan. Marka la barbardhigo daboolida gidaarka hal shey oo kaliya isbeddelaya qaababka, daboolida darbiga PVC waxay soo saari kartaa qaabab iyo naqshado hodan ah, sidaa darteed huteelo badan oo heer sare ah ayaa dooran doona daboolida darbiga PVC sida qalabka qurxinta derbiga.
2. Daboolka derbiga ee PVC ayaa "weligiis sii joogi kara"
Dareenka koowaad waa muhiim, laakiin waxaa ka sii muhiimsan sida loo ilaaliyo "quruxdan". Waqtiga ka dambeeya markii dhismaha la dhammeeyo, dahaadh badan oo derbiyada ah ayaa la kulmi doona dhibaatooyin sida gabowga maadada iyo midabbabaxa. Marka la barbardhigo noocyada kale ee daboolka derbiga, daboolka derbiga ee PVC, filimyada isku dhafan ee isku dhafan ee PVC ayaa sifiican u ilaalin kara "dhalinyarada", xitaa ka dib muddo dheer oo la isticmaalay, wali waxay leeyihiin midabada asalka ah ee midabada leh iyo muuqaalka dhalaalaya. Waxa kale oo ay leedahay faa iidooyinka ay leedahay biyuhu, sunta ka hortagga, iyo nadiifinta biyaha
3. Daboolka derbiga ee PVC wuxuu ku habboon yahay xaalado badan
Hoteello badan, goobo madadaalo, makhaayado, makhaayado iyo dhismayaasha xafiisku asal ahaan waxay doortaan inay u isticmaalaan daboolida darbiga PVC qurxinta derbigooda gudaha. Qaar ka mid ah horumariyayaashu xitaa waxay iibiyaan guryaha sare ee guryaha la deggan yahay, guryaha dabaqyada ah, iyo dhismooyinka xafiisyada ka dib marka lagu qurxiyo dahaadhka derbiga ee PVC.